हिमाल खबरपत्रिका | गर्मीलाई बुझौं
१-७ असार २०७६ | 16-22 June 2019
यस्तो त हुँदैनथ्यो ! काठमाडांै उपत्यकामा विषम जाडो र गर्मी हुँदैनथ्यो । जेठतिर तराई र छिमेकका विमानस्थलबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरित जहाजबाट बाहिर निस्कँदा प्राकृतिक ‘एअरकन्डिसन’ मा प्रवेश गरे झैं अनुभूत हुन्थ्यो । गर्मीमा काठमाडांैमा दिनको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्थ्यो । त्यसो त तापक्रम ३६ डिग्रीसम्म पुगेको पनि छ ।
अहिले भने काठमाडौंको मौसमी उतारचढाव बुझिनसक्नुको छ । यो बेला (वैशाख–असोज) घाम लागेको अपराह्न हामीलाई हप्प हुन्छ, टाउको दुख्ने, अल्छी लाग्ने जस्तो महसूस हुन थालेको छ । शरीरले चिसो खोज्न थालेको छ । पङ्खाको प्रयोग व्यापक भएको छ । ब्याङ्क, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टुरेन्टमा सीमित ‘एअरकन्डिसन’ अब हुनेखानेका घरमा पुगेका छन् । सूर्य बादलभित्र लुकेमा शीतल हुन्छ । एक, दुई दिन पानी पर्‍यो कि जाडो !
लामो समयसम्म मैले गर्मीलाई प्राकृतिक लयको रूपमा बुझें । सन् २०१४ मा गंगा र सिन्धु नदी (भारत र पाकिस्तान) मा गर्मीबारे गरिएको एक अध्ययनले भने गर्मी हुने प्रक्रियालाई कार्बन उत्सर्जनसित जोड्ने प्रयास गर्‍यो । अमेरिकी संस्था नेसनल सेन्टर फर आट्मोस्फेरिक रिसर्चर र पंक्तिकार कार्यरत सामाजिक तथा वातावरणीय परिवर्तन अध्ययन संस्था (आइसेट–नेपाल) संलग्न त्यस अध्ययनले ती दुवै क्षेत्रमा रात र दिनको तापक्रम बढिरहेको देखायो ।
बढ्दो तापमानसँगै वायुमण्डलमा बाफ पनि बढ्छ । तापक्रम र बाफको समिश्रणले ‘हिट इन्डेक्स (ताप सूचकांक)’ माथि लान्छ । अध्ययनले भन्यो, कार्बन उत्सर्जन बढिरहने हो भने गंगा नदी क्षेत्रमा सन् २०५० मा वर्षको १५० दिन २४ घण्टा नै हिट इन्डेक्स ३७ डिग्री सेल्सियस हाराहारीमा पुग्नेछ । २०१४ मा भने ७५ दिन मात्र यो इन्डेक्स ३७ डिग्री सेल्सियस छेउछाउ पुगेको थियो ।
३७ डिग्री सेल्सियस हाम्रो शरीरको सामान्य तापक्रम हो । ताप सूचकांक यसको हाराहारी पुगेको अवस्थामा शरीरले असहज महसूस गर्न थाल्छ । त्यस्तो गर्मीमा ६ घन्टाभन्दा बढी बसिरह्यौं भने तापकै कारण तनाव, आघात र अन्ततः मृत्यु समेत हुनसक्छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र असहाय जोखिममा पर्छन् । यस्तो गर्मीमा कृषि प्रणाली र खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुनेछ । काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनेछ ।
कार्बन उत्सर्जन जति धेरै कटौती गर्‍यो बढ्दो ताप सूचकांकसँग अनुकूल हुने खर्च उति कम हुन्छ । विडम्बना, विश्व यो बाटोमा छैन । सन् १८५० मा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा २८६ पीपीएम थियो, जुन अहिले झण्डै ४१५ पीपीएम पुगेको छ । आगामी वर्षहरूमा यसको मात्रा कति होला ? “जलवायु परिवर्तनले हाम्रा संस्था, पूर्वाधार र सामाजिक व्यवस्थामा ठूलो विचलन ल्याउनेछ”, अध्येता पिटर ग्लिक भन्छन् ।